Manampahefana voarohirohy ho nanao fihetsika mahery ara-nofo no alefan’i Rosia hitarika ny Vaomieran’ny Satan’ny Vehivavy amin’ny fivorian’ny Firenena Mikambana 2019 · Global Voices teny Malagasy
In March 2018, several women reporters accused him of sexual harassment.
Voadika ny 20 Avrily 2019 6:36 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, русский, Français, English
Leonid Slutsky misolotena an'i Rosia nandritra ny fotoam-pivoriana ririnin'ny parlemantera ao amin'ny OSCE tamin'ny taona 2017 // OSCE PA Flickr under CC2.0
Handefa delegasiona ao amin'ny vaomieran'ny Firenena Mikambana taona 2019 momba ny satan'ny vehivavy i Rosia, izay hotanterahina ao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana ao New York City manomboka ny 11 ka hatramin'ny 22 marsa — saingy nahahendretra kosa ny mitarika izany delegasioona izany.
Tafiditra tao anaty raharaham-panafintohinana iray i Leonid Slutsky, mpikambana ao amin'ny Antoko Demaokratika Liberalin'i Rosia (LDPR) mpandrendri-bahoaka farany havanana ao amin'ny Dumam-panjakana, raha nitory azy ho manao fanohintohinana ara-nofo ny vehivavy mpanangom-baovao maro ao amin'ny parlemanta.
Hanao tatitra momba ny satan'ny vehivavy any amin'ny Firenena Mikambana ka hisidina ho any New York amin'ny volan'ny mpandoa hetra i Leonid Slutsky, mpikambana ao amin'ny parlemanta malaza amin'ny fisintonana ny vehivavy amin'ny f….
Ahitana vehivavy efatra mpikambana ao amin'ireo antoko lehibe ao amin'ny Duma, antenimieran-dapa ambany rihana. Efa mpanao lalàna i Leonid Slutsky (tononina hoe SLOO-tski, tsy azo afangaro amin'ny mitovy fanonona amin'ny anarany, mpanazatra football) hatramin'ny taona 2000 ary izy no filohan'ny vaomiera parlemantera misahana ny raharaham-bahiny ao amin'ny Duma. Araka izany, dia efa nomena iraka izy hisolotena an'i Rosia eo amin'ny fivoriana parlemantera iraisampirenena sy ireo tsenan-kevitra sy lanonana maro.
Raha vehivavy telo ihany no nahasahy nitory azy ampahibemaso, efa azo heverina fa misy ihany koa ny lasibatra hafa saingy tsy mahasahy mandroso noho ny mety ho fiverenan'ny ratram-po na te-hanadino fotsiny fa tsy te-ho voasingotra amin'ny raharaham-panafintohinana.
Naharakitra ny fihaonany tamin'i Slutsky ny iray amin'ireo niampanga azy, Farida Rustamova avy ao amin'ny BBC Rosiana. Nandritra ny antsafa nataony tao amin'ny birao tao amin'ny Duma, nanao fanamarihana vetaveta maromaro i Slutsky momba an'i Rustamova ary avy eo nanomboka nisarangotra azy tamin'ny fitaovam-pananahana na dia teo aza ny tabatabam-panoherana mafy nataony. Nanolotra ny dikantsoratry ny rakitra teo anoloan'ny komity etikan'ny Duma izy — izay nitsipaka tsy handinika akory ny porofo fa nanafaka an'i azy madiodio tamin'ny fahadisoany rehetra.
Rehefa niharihary fa tsy hazonina ho tompon'andraikitra amin'ny fomba rehetra tamin'ireo lazaina ho hetsika nataony i Slutsky, dia seha-baovao am-polony tsy miankina amin'ny fanjakana no nanambara hanao ankivy ny Duma, hanaisotra ny tatitra ary tsy hamoaka na inona na inona avy amin'ny parlemanta ka tsy mifandraika amin'ilay raharaham-panafintohinana. Saingy, very an-javony izany fanoherana izany avy eo ary nanomboka nanao ny tatitra indray ny ankamaroan'ireo trano famoahana, sady mamerina ho eny an-toerana matetika ireo vehivavy mpanao gazety izay efa nilaza fa tsy mahatsiaro ho voaaro ao amin'ireo lalantsara malalaky ny parlemanta.
Nahangona sonia mihoatra ny 700 ireo sendikan'ny mpanao gazety mahaleotena sy mpiasan'ny gazety nalefa ho any amin'ny Parlemantan'i OSCE mitaky mba ho esorina amin'i Slutsky ny fitokisana azy, saingy novaliany moa fa tsy anjaran'ny antenimiera ny manapa-kevitra amin'izay hisolotena ny firenena sasany. Ary rehefa tsy misy moa ny lalàna ao Rosia ahafahana mitory azy ho misetrasetra ara-nofo eo amin'ny toeram-piasany, dia tsy ho azo heverina loatra koa ny isian'ny fikambanana iraisampirenena hanohitra izay fanendrena azy izay. Heverina ihany koa fa mbola ho ela vao ho lany ny lalàna tahaka izany: fa vehivavy mpanao lalàna iray ihany ao amin'ny Duma nanangana ny mety hisian'ny famerenana ho velona indray ny volavolan-dalàna 15 taona lasa izay zay hanomezan-tsazy izay manao fanohintohinana ara-nofo eo amin'ny toeram-piasana, fa tsy nisy intsony ny fivoarana taorian'izay.
Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy tafiditra ho anisan'ny delegasionam-pirenena hiresaka momba ny satan'ny vehivavy ao amin'ny Firenena Mikambana 2019 i Oksana Pushkina, vehivavy rosiana tokana mpikambana amin'ny parlemanta hany nanohana ireo vehivavy miampanga ilay mitovy asa aminy ho manao fanohintohinana. Ny misolo azy amin'izany kosa dia i Tamara Pletnyova avy amin'ny Antoko Komonista, izay nanohana mafy kosa an'i Slutsky nandritra ny raharaham-panafintohinana. Fantatra amin'ny heviny mpandala ny taloha i Pletnyova ary nanao fanamarihana mampiady hevitra faramparany teo: nanoro hevitra tamin'ny vehivavy rosiana izy hanohitra ny firaisana ara-nofo amin'ny samihafa foko sy volonkoditra nandritra ny Mondialy 2018 sy nilaza fa “marary” mila “tsaboina” ny pelaka nandritra ny antsafa nataony tao amin'ny fahitalavi-pirenena.
Nahazo isa 73,1 amin'ny 100 i Rosia eo amin'ny tondron'ny kitay telo an-dalana mamely ny vehivavy. Mijoro eo alohan'ny farany izy amin'ireo firenena post-Sovietika, ary i Uzbekistan irery ihany no ratsy kokoa noho izy amin'izany.